बुनेको कपडा कारखाना - चीन बुना कपडा निर्माता, आपूर्तिकर्ता
एसएस मेडिकल कुनै पनि बुना कपडा छैन
मेडिकल कुनै पनि बुनेको कपडा छैन
Pp + Pu सुरक्षात्मक कपडा कपडा
पीपी + पे मेडिकल कपड़ा
पीपी Spunbond ननव्वेन कपडा
हाम्रा उत्पादनहरू र समाधानहरू सुधार गर्न मर्मत गर्ने यो राम्रो तरिका हो। हाम्रो मिशन बुन्ने फॅब्रिक,,,, को एक उत्कृष्ट अनुभवको साथ उपभोक्ताहरूको लागि रचनात्मक समाधानहरू निर्माण गर्ने हो, हामीले पेशेवर उत्पादन ज्ञान र निर्माणमा समृद्ध अनुभव पाएका छौं। हामी सामान्यतया तपाईंको सफलता हाम्रो व्यवसाय उद्यमको कल्पना गर्छौं! धेरै राम्रो समर्थनको कारण, विभिन्न प्रकारको उच्च गुणवत्ताको माल, आक्रामक लागत र कुशल डेलिभरी, हामी हाम्रो ग्राहकहरूको बीचमा उत्कृष्ट नाम मनपराउँदछौं। हामी बुनेका कपडाका लागि फराकिलो बजारका साथ एक ऊर्जावान कम्पनी हौं, राम्रो मूल्य के छ? हामी ग्राहकहरुलाई कारखाना मूल्य प्रदान गर्दछौं। राम्रो गुणको आधारमा, दक्षतामा ध्यान दिन आवश्यक छ र उचित कम र स्वस्थ नाफा कायम राख्नु पर्छ। एक छिटो वितरण के हो? हामी ग्राहकको आवश्यकता अनुसार वितरण गर्छौं। जे होस् डेलिभरी समय अर्डर मात्रा र यसको जटिलतामा निर्भर गर्दछ, हामी अझै पनि समयमै उत्पादनहरू आपूर्ति गर्न कोसिस गर्छौं। भवदीय आशा हामीसँग दीर्घकालीन व्यापार सम्बन्ध हुन सक्छ।
ट्वील कपडा बुन्नको एक प्रकारको विकर्ण समानान्तर पसलको ढाँचा हो (साटन र सादा बुन्नको विपरित)। यो एक वा धेरै ताना थ्रेडहरूमा वेफ्ट थ्रेडलाई पार गरेर र त्यसपछि दुई वा बढी तानका थ्रेडहरू अन्तर्गत गरिन्छ र "चरण" वा प r्क्तिहरूको बीच अफसेटको साथ विशेषता विकर्ण ढाँचा सिर्जना गर्न।
टिल फॅब्रिक -S20170302
टिल फॅब्रिक- S20160065
टिल फॅब्रिक- S3036
टिल फॅब्रिक- S2944
टिल फॅब्रिक- S2857
ITwill एक कपडा बुनाई को एक प्रकार का विकर्ण समानान्तर पसल (एक साटन र सादा बुन्न विपरीत) को ढाँचा। यो एक वा धेरै ताना थ्रेडहरूमा वेफ्ट थ्रेडलाई पार गरेर र त्यसपछि दुई वा बढी तानका थ्रेडहरू अन्तर्गत गरिन्छ र "चरण" वा प r्क्तिहरूको बीच अफसेटको साथ विशेषता विकर्ण ढाँचा सिर्जना गर्न।
टिल फॅब्रिक- S2856
टिल फॅब्रिक- S2742
टिल फॅब्रिक- S2552
टिल फॅब्रिक- S2070
टिल फॅब्रिक- S1915mt
टिल फॅब्रिक- S1594